Sug, Trip — Didn't You Retire? — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Sug, Trip - Miyaanan aad hawlgab?
lamaane A bilood ka hor waxaan la yaabay qof walba by dhawaaqay brand album cusub, “Kaca.” Waxaad ma fahmin sida ay u adag waxa uu ahaa in ay sii xasilloon oo ku saabsan ka hor inta aan qoraalka iyo dadweynaha ayaan tegey,. album ayaa laga shaqeynayay muddo ka badan sannad, oo anna ma aan sugi karin in qof walba u sheegno - gaar ahaan kuwa weydiinaya markii aan hoos wax cusub lagu hayaa.
Jawaabta ilaa iyo haatan ayaa si qoto dheer yididiilo. Waxaan ahay yaabeen in qof ayaa sii waday in ay i taageeraan, inkastoo aan la quruxsan xasilloon ee labadii sano ee la soo dhaafay. Your jacayl iyo farax ayaa anigaa kordhay oo kaliya.
Mid ka mid ah jawaabaha waxaan lama yaabin by ahaa tan mid ka mid: "Sug, Waxaan u maleeyay in aad ka fariistay?"Tani waa su'aal ah in inta i raacda agagaarka sida hoos sii libdhaya. Waxaan u qabto in waraysiyo, Twitter, iyo posts blog, laakiin waxaan ogahay in ay weli caddeyn in qaar ka mid ah. Ha i sii wadaan in ay isku dayaan in ay si toos ah u dhigay rikoor: Waxaan marnaba ka fariistay.
In 2012, Waxaan ku dhawaaqday in aan noqon lahaa "sarre ka music iska." Haa, Waan ogahay in codadka ka fariistay-nin, laakiin waxaan ula kac ah uma isticmaali eraygiisii. Waan xajiyey waxaa si ula kac ah aan caddayn waayo, ma aan ahaa 100% hubin waxa uu u ekaan lahaa sida.
Waan ogaa waxa uu ahaa suurto gal ah in "The Life Good" ahaa album ugu danbeeyay ee aan, laakiin ma aanan hubin. Halkan waxa aan aqoon: waxaa jiri lahaa wareeg weyn mudnaanta in si wayn ka beddeli doonto sida aan la xiriira music. Anigu ma jiri doono wadada la emcees aan la shaqayn jiray sida badan. Anigu ma awoodi doonaan in ay kumbyuutarradeedu baxay farabadan of music cusub. Waxaan ma noqon doono heesaa ah wakhti buuxa. Waan ogaa waxaan doonayay inaan caawiyo kaniisad wadaad Ilaah.
Tan iyo waqti in, Waxaan u adeega ee aan kaniisadda ee Washington D.C. in doorka dhaqatada kala duwan. Waxaan sameeyey shaqo admin, wacdigii iyo cilmiga, wasaaradda dhalinyarada, la-talinta guurka, iwm. Anna waxaan ku tegey bilood aan sameeyo wax muujinaya ama qoraal bar hal gabay sababtoo ah waajibaadka kaniisadda. Waxaan xitaa ka maqnaa 2013 Tour Unashamed. Oo in kastoo aan seegay abuuraya music cusub, Waan jeclahay wixii aan la samayn. arrimaha caafimaadka ayaa ka dhigtay in ay adag waqtiyo, laakiin waxa ay ahayd xilli abaal waayo, aniga iyo qoyska.
Ka dib markii ay sanadkii hore oo waqti-buuxa wasaaradda dhaqatada, Waxaan go'aansaday in si tartiib tartiib ah uu bilaabo shaqeeya rikoor cusub. casiirka My hal abuur leh ayaa la dhalooyin kor, oo diyaar u ah inay tagaan waxaan ku jiray. Laakiin halkii dilaaca shan ama lix bilood oo qoraal aan kala joogsi lahayn oo lagu qoro a, album oo intaasu waxay ahayd mid gaabis ah oo joogto ah tan iyo markii music ma wuxuu ii ahaa shaqo wakhti buuxa. Taasi shaqeeyay baxay weyn sababtoo ah si tartiib tartiib ah waxaan farsameeyaan yaabaa song kasta, iyo aad u hesho sida ugu dhow si kaamil ah sida ugu macquulsan.
Waxaan goostay in aan la mid saare waqtigan shaqeeyaan, halkii ay aqbalayaan gudbiyo track ka farabadan of guys kala duwan. Markii aan keenay fikrada ah in Gawvi uu u jecel yahay, oo waxaan riixay kasta oo kale si ay u sameeyaan wax cajiib ah. safar kasta oo aan u sameeyey in Atlanta ayaa muhiim sababta oo ah waxa uu ahaa sidaas u adag in ay ka waajibaadka qoyska iyo kiniisadda iska heli. Laakiin halkan waxaan ka weyn tahay sanad kadib, waana ku dhawaad ​​baxay!
Waan ogahay dadka qaarkood ayaa weli wareersan oo ku saabsan waxa aad filan iga mustaqbalka. Waxaa jira wax dahsoon badan ii, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa waxa aan ognahay:
– weli waxaan doonayaa in aan noqdo wadaad a.
– weli waxaan doonayaa in aan sameeyo music.
– weli waxaan doonayaa in aan u safro in raab lagu hadlo.
– weli waxaan doonayaa in aan qoro buugaagta.
Oo haddana waxaan isku dayayaa si aad u ogaato sida ama haddii aan samayn karo oo dhan waxyaalahaas hab in Ilaah maamuusaan, halka weli aamin qoyskeyga iyo kiniisadda Ilaah ee.
Dardaaranka “Kaca” noqon album ugu danbeeyay ee aan? Waxa ay noqon kartaa, laakiinse anigu uma aan rajaynayaa. Hadda, Waxaan doonayaa in aan ku raaxaysan la joogo iyo wadaagto aad oo dhan waxa aan u malaynayaa waa shaqada ugu fiican weli. Wax badan ayaa beddelay tan iyo markii 2012, laakiinse wax isku mid: Ciise waa Rabbi, iyo Waxaan doonayaa in aan isaga maamuusaan my music.
Michael • October 8, 2014 at 4:47 waxaan ahay • Reply
Aad ayaan ugu faraxsanahay in la maqlo music cusub Trip Lee ayaa ahay. Ma sugi karo album cusub. Runtii nin tayo leh
Tony • October 8, 2014 at 8:32 waxaan ahay • Reply
Maalinta Good walaalkay wanaagsan? Its wax cabsi badan aad iyo kacsi iyo rabitaan music ayaa weli dhex maraya xididdada aad sidoo kale aad jeceshahay inaad la faafin ereyga Ilaah iyada oo wacdiyada. Waxaan qiyaasi karaa sida waqti wax la qoyska, music, waajibaadka wasiir iwm. Wuxuu ku dhashay ka D.C iyo sara Ft. Worth, ay wax weyn si aad u aragto walaal qoorta of kaynta aan ka shuqulka Ilaah ee meel walba oo.
Thanks for walaalkiis music ah.
Francis • October 8, 2014 at 10:14 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay hufnaan Joogta!
MrAveryBrown • October 8, 2014 at 10:19 waxaan ahay • Reply
Safarka ayaa had iyo jeer si ula kac ah oo joogto ah ee wajiga uu u leeyahay waxbaridda, wacdiyaya, iyo music, taas ayaa ii dhiirigelinayaa iyo sii wadaan in ay igu dhiiri-, maalin kasta. Markii lagu dhawaaqay bilowga ah waxaa loo sameeyey in 2012, Waan ogaa rasmiga ah waxa uu ahaa ma “hawlgabka”, kaliya wareeg ah istiraatiiji ah in ay diiradda saaraan wax kale. hadda, uu si raaxa leh dheelli wacdigii, baridda, music, iyo qoyska ee jidka wayn. Waana sababta aan sii wadi doonaa in isaga taageeraan in dayada uu, iyo sida uu ku xusan “Ciise waa Rabbi, iyo Waxaan doonayaa in aan waynaysaan…” waxaan idinku leeyahay, sii wado Trip, noloshaada, music iyo wasaaradda hadla Muga, yada a, codbaahiyaha a, ama qaniinyada codka, noloshaada iyo sida aad si ula kac ah naftaada qaado, ku hadla Muga.
DavidQuinones • October 8, 2014 at 10:21 waxaan ahay • Reply
Trip marnay…noloshaada iyo hamiday, waayo, Ciise i amazes!! runtii Waxaad qalbigayga ku barakeeyo. waxaan ahay qof jecel yahay dadka dhab ah iyo in kastoo i aadan haysan xiriir dhow si aad u, xaqiiq tahay in baxa aad fan iyo farriimo aad. i aad ku kulmay Philadelphia at University Carin laba sano ka hor oo ay ahayd waayo-aragnimo nololeed beddelo… hamigeygu waa inaan maalin maalmaha ka mid aad shaqada ee wasaaradda iyo in music…. saaxiibkay sii iimaanka!!!
Kevin Halloran • October 8, 2014 at 10:22 waxaan ahay • Reply
Great si aad u maqasho, Trip! Ka dhig ku wacdiyaya oo raab ah hadalka. Faraxsan inay arkaan wixii Sayidku wuxuu leeyahay dukaanka.
MattShafer • October 8, 2014 at 10:22 waxaan ahay • Reply
Waxaan ku faraxsanahay in aad dib u samaynta music ahay laakiin, in ka badan in, Waan ku faraxsanahay in aad soo socda jidka Rabbiga doonayo in aad si ay u tagaan. Your music, buugaag, iyo fariimaha ayaa uplift weyn ii labadii sano ee ugu dambeeyay. Waad ku mahadsan tahay wax badan, kuwa. Waxaad tahay baryadayda.
Michael Jimenez • October 8, 2014 at 10:50 waxaan ahay • Reply
Turaanturoon aad tahay waxyi ah oo dhan naga Christian heesaa ah. Waxaan taageero go'aamada kasta iyo wax kasta oo aad samayn. waxaa Hayso
John Widner • October 8, 2014 at 10:55 waxaan ahay • Reply
Trip Lee waa ninka ugu fiican sii ninkii hawsha wanaagsan
Logan • October 8, 2014 at 11:00 waxaan ahay • Reply
VICTORKHIZ • October 8, 2014 at 11:06 waxaan ahay • Reply
HAA! WAAD KU MAHADSAN TAHAY THIS SOCDAAL post blog! Waa inay dhiirri-galinaysa in EEG aad weli u furan yihiin Making Music LAAKIIN ISLA WAQTIGA AADNA JOOGTO aamin WASAARADDA ee kaniisadda. WAXAAD TAHAY MID DUDE tayo leh. Waxaan rajeyneynaa in DHAGEYSIGA AAD KU NOOSHAHAY Mar labaad. Inaannu idiin soo ducayno.
lahaa • October 8, 2014 at 11:11 waxaan ahay • Reply
Trip, Waxaan ahay ha ku faraxsanahay in aad go'aansatay in ay oggolaadaan in Ilaah mar kale aad isticmaasho in music. Waan jeclahay shuqulkiisa, oo waan ku faraxsanahay in ugu dhakhsaha badan waxaan yeelan doonaa Gurtida more khuseeya Ilaah ku ammaanaan waxa u ahay. Trip, aad ayaa dhiirigelin caynkaas ah, ma aha oo kaliya in ay dhallinyarada, laakiin in yar yar ee wadnaha, iyo kuwa dunida oo dhan. Waxaan rajeynayaa in wiilkayga soo baxday in uu noqdo nin ka dib markii Ilaah qalbigiisa ku, sida naftaada, iyo wixii uu kuu ogolaan doonaa in Ilaah si ay isaga u isticmaalaan in ay suurto gal everyway. Waxaa muhiim ah in ragga dhallinyarada ah ay leeyihiin tusaale sida Ilaah doonayo iyaga ka hor. Ka dhig doonista Ilaah samaynaya. Waxaan aaminsanahay in ay sii joogi Eebe adeeca, Ilaah isu muujiyo iyo aad u soo qaado bogsashada. Noqo mid la barakeeyey!
Andrew • October 8, 2014 at 11:41 waxaan ahay • Reply
Waan jeclahay sida Trip Lee sameynayo wixii Rabbigu isaga ugu baaqay in ay sameeyaan. Waxa uu ka dib Rabbiga iyo isaga lagu maamuusayo oo uu music. Ka dhig samaynayaan wixii Rabbigu wuxuu idiin yeedhay inaan sameeyo.
Kaaleeb Gordon • October 8, 2014 at 1:30 pm • Reply
Ma sugi karo inaan idin arko at WinterJam!
Robert May • October 8, 2014 at 1:32 pm • Reply
Waxaan ahay aad ugu faraxsan in ay arkaan in aad anshax ku filan oo ay si tartiib ah u samayn music iyo si buuxda uga go'an in ay qoyskaaga iyo Church Ilaah. Ma sugi karo inaan maqalno album in kastoo.
ixtiraam • October 8, 2014 at 2:48 pm • Reply
Woow tani waa mid laga cabsado Trip.I aan la sugi karin, waayo, Kac inay ka soo baxaan soon.I definetly qabaa album this waxa uu taabto wax badan oo people.Your music dhiiri me.Continue inuu maamuuso Rabbiga sida aad u samayn.
Barako jidka oo dhan ka New Zealand!
RommelAlonzo • October 8, 2014 at 3:41 pm • Reply
Xaqiiqdii waan soo jeedi in aad Bro! Sida qof arday PhD injineerinka ah, wadaad dhalinyarada iyo hoggaamiye cibaadada iyo waxyaabo kale oo a, aad tahay halganka si aad u hesho si ay u isticmaalaan oo talanti oo ah Ilaaha idin siiyey ayaa igu dhalisay in aan la quusan helitaanka nolosha Good. Sida ugu dhakhsaha badan waxaan maqlay horyaalka ee album cusub, Waan ogaa oo intaasu waxay ahayd Jidka Eebe i tellin waxa la joogaa wakhtigii ilaa toosin iyo in aan quusan on helo nolol wanaagsan isaga in. Xitaa haddii aan, aad music i xusuusinayaa in uu maayo. Waad ku mahadsan tahay music iyo halganka aad naftaada dhigay iyada oo ay si fudud u helaan fariin ku soo baxay.
Sarah • October 8, 2014 at 3:59 pm • Reply
ixtiraam badan kuu, Trip Lee. Waxaad tahay nin Ilaah. Waxaad had iyo jeer ahaa mid ka mid ah heesaa aan jeclaa oo aan ma noqon karaan kuwo ku faraxsan tahay in aad sii daayo music cusub gudanayaan waajibaadka aad qoyskaaga iyo kaniisadda.
Waxaan leeyahay mahadnaq u badan inuu Ilaah u xaqiiqda ah in in fanaaniinta aad sida jiraan. Waxaad, Ilaah, i siiyaa waxyoonay aad u badan oo ku dhex jira labada aan halganka iyo guulaha ugu, iyo in aan jeclaan lahaa si ay u muujiyaan qadarin aan daacad ah. Waa mid ka mid ah riyooyin aan doonayaa inaan idin arko in riwaayad, adiga oo booqanaya New Zealand ama by ii Maraykanka u safraya mid ka mid ah shows aad! Ilaahay ha barakeeyo iyo jacayl badan oo adiga iyo qoyskaaga u qurux badan si aad u.
Ashley • October 8, 2014 at 5:18 pm • Reply
Trip Awesome! Sii wado halkaas oo uu idin keenaysaa…iyo fadlan nala wadaagto dhammaan khibradaha aad la yaab leh sida aad u tagto!
Brandon • October 8, 2014 at 5:55 pm • Reply
Anigu waxaan had iyo jeer ku kiciyeen oo lagu dhiiri by artistry Trip ee. Waxaan Ilaah ugu mahad walaalkiis in. Waxaan rajeynayaa inuu guuro Atlanta si aan u dhisi karaan.
Nick • October 8, 2014 at 10:22 pm • Reply
ErickCorral • October 8, 2014 at 10:58 pm • Reply
Ma sugi karo for this album cusub. Waxaan Bilaabo dhagaysto hip hop Christian in 2013. artist First aan maqlay Lecrae. Waxaan la khali tan iyo markii aan marka hore maqlay Dhar Church. Time by tegey oo Waxaan bilaabay si aad u ogaato oo ku saabsan Andy Mineo, KB, Trip Lee, Tedashii iyo wixii la mid ah. All of guys kuwan’ music uu noloshayda iska beddelay. Dhulku bedelay ila dhadhan ee muusikada iyo sidoo kale i dhiirri-galiyay si ay u helaan ay siyaado uga qayb rumaysadkayga. Ku mahadsan tahay in aad safar iyo inta kale ee 116. Waxaan rajeynayaa inaan aad u hesho inaan dhowaan ku arko in riwaayad. Ilaah ammaan.
CB • October 8, 2014 at 11:09 pm • Reply
Trip, sida aad dibaddeeda music, Waxaan ogaaday farqiga daran ee hab rumaysadkiinnu & xirfadiisa ka kale 116 fanaaniinta. Waxaan la arki karin & dareemaan dhex guura in baxda ee gacmaha Aabbaha ayaa aad muhiimadda koowaad (ma leh in runta ah ee fannaaniinta kale ma aha). Waxaan aad u bogi waayo, jidkii aad soo maray ku saabsan dabagalka aad gool. Waxaan ahay faraxsanahay in aan taageero u yahay idinkaa & Ayuu u faraxsan in ay jiraan music cusub ee aad ka soo. Waxaan baryayaa Isaiah 60:1-2 aad ka weyn & qoyskaaga, sida waxaan dareemayaa in goor wanaagsan in Ilaah la ammaano in uu bayaan u dhalaalayo galay noloshaada, waa waxa aad sameynayey muddo sanado ah la soo dhaafay. Igu salaama!
JoshuaDenim • October 9, 2014 at 12:04 waxaan ahay • Reply
Waan ku faraxsanahay waayo, waxaad Bro. Waan ogahay inaad sameyn doonaa wax kasta oo Ilaah waa weydiinaya oo idinka mid ah. Laakiin si aad u odhan tani waa yet..I'm shaqo fiican runtii ugu faraxsanahay inaan maqlo waxa Ilaah ayaa yeynan ku sii jireen qalbigaaga iyada oo music ah. Ilaah ha idiin barakeeyo nin iyo mahad ii barayay oo dhan waxyaalaha aad qabto iyada oo aad music.
PS – 20/20 Tababaraha ahaa!! lol
AustinRoberts • October 9, 2014 at 12:22 waxaan ahay • Reply
Trip, Waxaan ku faraxsanahay inaan aad u ogaato waxay abuureen album cusub ahay. Waxaan dheeraad ah oo ku faraxsan sida xaqiiqada ah aad dhinac ka music casilay intii muddo ah in ay diiradda saaraan waxyaabaha noloshaada shakhsi ahay, in aad dareemay ahaayeen fog ka muhiimsan kaas oo waxay ahaayeen. Muddo sanado ah waxaan kor u eegay in aad sidoo kale dhowr ah oo aad emcees la shaqayn jiray, maxaa yeelay, haddii aanan bilaabay dhagaysto, waxa ugu yeedhi lahaa lyrics Diintooda, badan waxaan idiinku yeedhi lahaa erayadaada, ama songs halkii, markhaatifurkaaga lyrical iyo preachings. Ka hor inta maqalka aad music, Waxaan ku jiray meel mugdi ah. Waxaan lahaa fog dhacday hubka Ilaah. Your music, iyo sidoo kale fanaaniinta kale, i keenay oo u dhaw in Ilaah oo i dhiiriyo inuu naftayda wanaagsan. Waxaan aad iyo sidoo kale emcees kale mahad ee category ii Waxyoon oo igu dhiiri in ay yimaadaan oo u dhaw in Ilaah. Waxaan adiga iyo waxa aad samayn sababtoo ah ma samayn wax aad samayn naftaada u taageeraan. No. Waxaad iyaga ku sameeyo magaca Rabbiga waan tixgelinayaa in si ka badan. Hay waxyaabo aad samayn. Ilaah ma aha samaysay kula weli ka shaqeeya. Ilaah ha barakeeyo.
Lillian • October 9, 2014 at 8:59 waxaan ahay • Reply
Qaaday erayada saxda afkayga. Waxaan ahay ku faani aad ee, Trip, oo faraxsan, waayo, wax kasta oo aad doin. :) waxaa sii wad!
GabeTaviano • October 9, 2014 at 11:15 pm • Reply
Qaar ka mid ah oo kaliya ma qaadi erayadii wax sii sheegidda aad, in aad aan la tilmaamayo oo kaliya in Ilaah isagoo uu Brett Leverkusen.
DrowningInGrace • October 11, 2014 at 11:10 waxaan ahay • Reply
Waxaan Ilaah ugu mahad aad u dadaala oo furitaankii in eraygiisa. Wakhtiga lagu qaatay on your album iska cad in tareenka oo la sii daayay ilaa hadda. Waxaan jeclahay in aad shaqada iyo adeegiddaada, iyo sugaynaa in wixii Ilaah leeyahay dukaanka for Body of Masiix ku dhex.
Grace iyo Peace.
Julia suuxaan • October 14, 2014 at 9:34 waxaan ahay • Reply
waxaan dhawaan (4 maalmood ka hor) kaliya aad ku aragtay riwaayad ee Salt Lake City, KA. Waxaan gabi ahaanba jecel yahay sida aad ahaayeen si hufan ee songs. Waxaad si cad u injiilkii ku wacdiyeen, mahadsanid. Thanks aad u badan, rajadii dunida keeno in magaca Ciise. Ku jeclahay!
Julia suuxaan • October 14, 2014 at 9:35 waxaan ahay • Reply
tamsyn • October 19, 2014 at 3:32 pm • Reply
Hi safar Lee. Waxaan jeclahay in aad song guusha macaan. Waan jeclahay siidaayay of lyrics aad. Its runtii iga caawiyay dareemayaa ay jiraan dad daacad ah ula xiriiraan karo halgan aan sida isagoo Masiixi ah. Keeni ay ma fududa. Markhaati sida Ilaah aad loo isticmaalo ay sabab u tahay addeecidda, ie haray aamin inkastoo xanuunka- dhiirigelisaa oo aan i caqabadaha in ay ka jaftaa baxay labada, laakiin in ay sii riixaya on.Christ waa soo faani U. Ilaah ammaan! Tamsyn, Koonfur Afrika
JesiliaLeaupepe • October 21, 2014 at 9:30 pm • Reply
Aniga, saygayga ku faraxsanahay for this album cusub oo waan maqlay song kasta oo la qabtay ilaa laga sii daayay Kac. Waxaad helay walax weyn Bro on. Waxaan ku faraxsanahay in la taageeraya adiga by iibsashada aad album cusub. (By habka, aad tahay waxyi weyn ninkaygii. Waxa uu taageere weyn u ah idinkaa-ka raab ah, si ay u iibsato buugga, iyo in maxfalka jacaylka aad naagtaada iyo carruurta iyo sida aad u soo bandhigo waqtiga wareysiyada oo dhan).
Ilaahay ha barakeeyo aad Bro. Ilaah laga yaabo inay sii idin siin xoog aad u baahan tahay si ay ula xilalka oo dhan ka qaban. aad Taageeridda jidka oo dhan ka Bay ee California.
-ka Leaupepe ee.
Liz • October 23, 2014 at 12:58 pm • Reply
Idinku waad barako noocan oo kale ah aniga iyo kuwo kale oo badan si ay u. Ilaah ayaa si cad u muujiyay, xitaa iyada oo aad tabar.
Xusuuso: Ciise Masiix Empire | Trip Christian Caanka ah Lee Sheegay Taageerayaasha 'Waxaan Marna howlgabay’ From Game Hip Hop ah
Xusuuso: Trip Lee ayaa sheegay in uu Marna ka fadhiisatay Music | BCNN1 WP
Billy • November 12, 2014 at 11:22 pm • Reply
Bro waxaan kaliya soo bixi aad album iyo maaaannnn songs qaarkood ku dhowaad keenay ilmada indhahayga. Waad ku mahadsan tahay reppin nin uu Sayidku idin dhan ayaa barako weyn ee noloshayda oo wuxuu i geeyey u dhaw in ay Ciise oo aad music. #116
John • November 21, 2014 at 6:03 waxaan ahay • Reply
Trip, Waan jeclahay album cusub. Dhageysiga saaka ka hor inta shaqada. Sidaas yididiilo!
Abiigayil • August 10, 2016 at 4:13 pm • Reply
Waan jeclahay safarkaaga MUSIC!!!!! Waan jeclahay sida aad u matalaan injiilka aad music. Mahadsanid!! Ilaah ammaan!!!